Wasiiro ka tirsan Dowladda gobolledka galmudug oo ku geeriyooday Shil Gaari.
Gaalkacyo SONNA:- Shil Gaari ay ku geeriyoodeen Wasiiro ka tirsan Dowladda Goboleedka Galmudug ayaa ka dhacay Gobolka Mudug gaar ahaan inta u dhaxaysa Bandiirad leey iyo Sadex Higo.
Wasiirada la xaqiijjiyay in ay ku geeriyoodeen shilka ayaa kala ah Wasiiru-dawlaha Maaliyadda Dowladda Galmudug Baashe Magan, Wasiiru-dawlaha hawlaha Guud, Aways Cali Siciid, iyo Nabadoon Cabdulaahi Yusuf Guuleed, iyo nin ka mid ahaa ilaaaladooda.
Gudoomiye ku xigeenka Siyaasada iyo maamulka Gobolka Mudug Axmed maxamed shire qoodar, ayaa Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliyeed ee Sonna U sheegay in shilka gaari ay ku geeriyoodeen wasiirada iyo Nabadoonka uu ka dhacay deegaan u dhaxeeya bandiiradleey iyo Sadex Higo ee Gobolka Mudug.
Wararkeena danbe ayaan idinkugu soo gudbin doonaa wixii ku soo kordha insha alaah